China Controller Bhodhi Rakadhindwa Circuit Assembly Kugadzira uye Fekitori | KAISHENG pcb
PcbFuture inokonzeresa gungano rese rePBB kubva kugadzirwa kwePBB, zvigadzirwa zvekuwanikwa, gungano reSMT, kuburikidza negungano regomba, kuyedza uye kuendesa. Seye inotungamira yemagetsi gungano inogadzira ichipa vhoriyamu pcb musangano masevhisi, isu tinoona kuti zvigadzirwa zvako zvakasununguka zvachose uye zvakaderera mumutengo.
Midziyo Yesimbi: HASL inotungamira mahara Mamiriro Ekugadzira: SMT + Germinales: 8 rukoko pcb
Solder Mhando: Kutungamira-Mahara One-Stop Services: Pcb Kugadzira + Zvikamu + Gungano Kuedzwa: 100% AOI / X-ray / Visual Test
Tehnology Tsigiro: Yemahara DFM (Dhizaini YeKugadzira) Tarisa Mhando dzeAssemblies: SMT, THD, DIP Yakajairwa: IPC-a-610d
Mazwi ekuti: Pvcbvanhu, Pcb Assembly Vagadziri, Yakachipa pcb Assembly, pcb Assembly Sevhisi, pcb Assembly Maitiro
1. Tinogona kuburitsa nekukurumidza kutendeuka kuti tisangane maawa makumi maviri nemaviri ekuendesa maPCB ane mativi maviri, 48-awa kwema 4 kusvika ku8 masenduru uye 120-awa ye10 diki kana epamusoro maPCB. Isu tinochengetedza yako nguva kana mutengo kwauri izvo kuti udzikise uye uwane iro basa revazhinji vatengesi rinosanganisirwa.
2. Isu tine mutengo wekutonga kune yega yega maitiro kuitira kuti tipe vatengi vane yakaderera-mutengo pcb uye pcb gungano ..
3. MaPBB edu emhando yepamusoro anobva pazvinhu zvakasvibirira zvatinosarudza, michina yemhando yepamusoro yatinoshandisa, maitiro atinotevedzera, manejimendi anokwanisa anoteerera uye nevashandi vedu vese vatinazvo.
4. Isu tinopa inokurumidza kutendeuka pcb sevhisi uye nekukurumidza kupindura kune PCB kubvunza. For miviri mativi pcb kumumvuri, isu tinotsigira maawa makumi maviri nekukurumidza basa.
Fast zvichachinja pcb basa
Kupindura nekukurumidza kwekubvunza kwePCB
Maawa makumi maviri nemana ekutsigira basa
Low mutengo pcb gungano
Izvo zvakanakira yedu Vhoriyamu pcb Assembly:
• Ese maPCB asina kusarudzika ari 100% bvunzo (E-bvunzo, Solderability bvunzo, FQC uye nezvimwewo).
• Mitsara yakawanda yegungano kusangana nezvinodiwa zvakanyanya nevatengi.
• Ipai prototype pcb musangano webasa rekuyedza pamberi pekugadzirwa kwakawanda.
• Kutanga kugadzirwa kwemazhinji kana kupa rwechipiri nguva prototype PCB gungano kugadzirwa mushure mevatengi kupasa kuyedzwa kwese.
• Kuongorora kweAOI uye kuongorora kunoonekwa panguva yegungano rePCB.
• Kushandisa X-ray kuongorora kweBGA uye mamwe mapakeji akaomarara.
• Kana pakawanikwa chero matambudziko egungano, mainjiniya edu ane ruzivo anogona kuzvigadzirisa vasati vatakura.
• Isu tine timu ine ruzivo rwekugadzirisa matambudziko ese egungano uye tinotumira iwo maPCB emhando yepamusoro kwauri nenguva.
Pcb Order Zvakawanda
Isu hatitaure huwandu hwePCB odha. Unogona kukurumidza kutendeuka Prototype PCB. Izvo hazvina basa kuti huwandu hwacho chidimbu chimwe chete. Isu tinopa madiki uye epakati mabatch uye maodha makuru.
Kwete chete hatina chinodikanwa uye kudzikiswa muhuwandu, asi zvisinei hazvo kuti kuraira kwacho kwakadii, isu tinopa yakaderera-kudhura uye inokurumidza-kugadzira pcb yekugadzira masevhisi uye masevhisi egungano sepakutanga.
Nekuda kwekugona kwekugadzira, mutengo wevashandi, zvikamu zvekutenga zvekutenga uye zvimwe zvinhu, hatikurudzire kuti ukure-unganidza maPCB kumwe kunhu. PcbFuture ine yakasarudzika zvakanakira yakaderera mutengo, wakanaka kugadzirwa tekinoroji, uye inofanirwa kutakura.
PCBFuture inoenderera chinangwa ndeye rubatsiro kune vatengi vedu mukugadzira izvo zvemhando yepamusoro zvigadzirwa nemakwikwi zvakanyanya mukana mumaindasitiri avo. Ndapota taurasales@pcbfuture.com yepurojekiti yako inotevera.
Pashure: Kudzora bhodhi gungano
Zvadaro: Ems pcb Assembly
Flex pcb Assembly masevhisi